Gurman wuxuu hubiyaa in AirPods -ka cusub ee 3 lagu soo bandhigi doono iPhone 13 | Waxaan ka imid mac
Waxaa jira durba warar badan oo aan helnay muddo bilo ah oo ku saabsan jiilka saddexaad ee AirPods in Apple ay qorsheyneyso inay soo saarto sanadkan.
Xitaa jilitaannadii ugu horreeyay ayaa mar horeba la iibiyay, xitaa ka hor inta aan la bilaabin dhagaha dhagaha ee asalka ah. Iyo hada Mark Gurman wuxuu xaqiijinayaa in si wada jir ah loogu bilaabi doono iPhone 13. Marka uu webigu dhawaaqo, biyuhu waxay qaadaan. Waan arki doonnaa.
Sida ugu fudud ee aaladda cusub ee Apple ay tahay, ayay u dheer tahay in la bilaabo. Goorma Craig Federighi Wuu naga yaabiyay dhammaan isagoo soo bandhigay mashruuca Apple Silicon, dhowr bilood gudahood waxaa jiray dhowr Macs oo M1s suuqa yaallay.
Taa bedelkeeda, aalado aad u dhib yar sida kuwa caanka ah AirTags, waxay qaadatay ku dhawaad ​​hal sano in la bilaabo tan iyo markii ay soo baxeen wararkii ugu horreeyay. Iyo waxa loogu yeero AirPods 3, isku si u soco. Xitaa xoogaa garaacistii jiilka saddexaad ee AirPods ayaa durba suuqa ku dhacay, ka hor aaladdii asalka ahayd.
Mark Gurman, ayaa soo dhigay bartiisa Bloomberg in kan cusub 3 AirPods Waxaa la sii deyn doonaa iyada oo lala kaashanayo khadadka cusub ee iPhones 13, malaha bisha Sebtember. Iyadoo la tixgelinayo in wararkii ugu dambeeyay ay sheegeen in soosaarka baaxadda leh ee taleefoonnada dhagaha la bilaabay bishii Ogosto, waxay aad ugu dhowdahay in soo bandhigistoodu noqon doonto furaha dhaqanka ee bisha Sebtember halkaas oo Tim Cook uu na tuso iPhones -ka cusub ee sanadkan.
Shalay waxaan horey u daabacnay aaladaha Apple qorsheyneyso inay dhowaan soo saarto maxaa yeelay waxay ka diiwaangelisay galka Guddiga Dhaqaalaha Eurasia. Liisku waa taxanaha cusub ee Apple Watch 7, iPhone 13, iyo MacBook Pro -ka cusub.
AirPods qasab ma aha inay ka diiwaangashan yihiin wakaaladdaas, maadaama qalabkooda gudaha uusan lahayn xog sir ah. Markaa waxaan si fiican u arki karnaa iyaga oo la bilaabay Sebtember, iyada oo aan hore loo arag “caarada” EEC. Toddobaadyo yar gudahood waxaan yeelan doonaa shaki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Gurman wuxuu hubiyaa in AirPods 3 cusub la soo bandhigi doono iPhone 13
Ugu dambayntii Apple ma la wareegto shirkadda wax soo saarka ee Reese Witherspoon